Booty mozika tsara indrindra ho an'ny Discord - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 11/06/2022 20:00 | fandaharana
Raha tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny Discord ianao, ary tsapanao fa lasa mankaleo ny efitranon'ny chat, dia hahaliana anao ity lahatsoratra ity. hiresaka momba ny bots mozika tsara indrindra ho an'ny Discord isika. Ny mpampiasa rehetra an'ity mpizara ity dia mikatsaka ny hanome endrika miavaka ny fantsonany, ary ny fahafantarana fotsiny hoe iza no loharano tsara indrindra ho azy.
Ity sehatra ity, dia manolotra anao ny fahafahana mamorona toerana araka ny tianao, manampy singa samihafa izay mahatonga azy io ho tena manokana. Azonao atao ny mamorona fantsona, mpizara ary na dia mamolavola ny botanao manokana aza araka ny tsironao.
Discord dia lasa iray amin'ireo sehatra fandefasana hafatra an-tserasera lehibe indrindra. Misy karazana bots isan-karazany ampiana amin'ity sehatra ity, izay mety misy avy amin'ireo mikendry ny handamina ny chat, ka hatramin'ireo izay manana ny asany lehibe indrindra dia ny fialamboly, toy ny bots mozika. Tsy vitan'ny hoe mitondra fanangonana ireo bots mozika tsara indrindra izahay, fa ho an'ireo izay tsy mahalala Discord dia hiresaka momba izany ihany koa izahay.
1 Discord; inona izany ary inona no asany
2 Inona no atao hoe bots amin'ny Discord?
3 Bots mozika tsara indrindra ho an'ny Discord
Discord; inona izany ary inona no asany
Azo antoka fa raha mifandray amin'ny tontolon'ny mpilalao ianao dia ho fantatrao tsara ity sehatra ity. Satria izy io dia manana ny asany amin'ny fandaminana, fihaonana amin'ny olona vaovao ary fifandraisana amin'ny namanao. dia momba ny fampiharana chat mitovy amin'ny sehatra hafa manana fiasa mitovy.
Amin'ny ankapobeny dia mikendry ireo mpampiasa ao anatin'ny tontolon'ny lalao, izay ahafahan'izy ireo mihaona, mandrindra ny fomba filalaovany sy ny firesahana mandritra ny lalao. Tsy ny mpilalao ihany no mampiasa azy io, fa ny orinasa sasany manana mpiasa be dia be koa.
Ny fahafahana mifandray amin'ny alalan'ity fampiharana ity dia dingana tena tsotra, ankoatry ny fanolorana anao karazana fikarohana isan-karazany hahitana olona manokana ary afaka manampy azy ireo amin'ny lisitry ny fifandraisanao. ity sehatra ity Azo faritana amin'ny teny roa izy io, dia ny fandaminana sy ny fifandraisana.
Araka ny efa voalazanay, ny ankamaroan'ny mpizara amin'ity sehatra ity dia mifandraika amin'ny tontolon'ny lalao video, fa koa afaka mahita lohamilina samihafa ianao izay iresahana lohahevitra hafa toy ny anime, toe-karena, fahasalamana ara-tsaina, na mihaona olona vaovao fotsiny ary mahazo namana vaovao.
tsy mitovy hevitra, miavaka amin'ny hafa noho ny isan-karazany ny chat safidy. Ary koa, tsy mampiadana ny lalao izany rehefa miresaka amin'ny namanao na ny mpiara-miasa aminao ianao. Noho ny famoronana andraikitra ao anatin'ny mpizara iray dia azonao atao ny mitantana sy mandrindra ny zava-mitranga amin'ny mpizara raha tsy eo ny mpamorona fototra.
Inona no atao hoe bots amin'ny Discord?
Ny bots amin'ny Discord, dia programa izay miasa ho azy ny asa iray. Ireo fiasa ireo dia mety manomboka amin'ny filalaovana mozika ka hatramin'ny fifandraisana tsotra eo amin'ireo mpampiasa server.
Miankina amin'izay tianao hotratrarina dia tsy maintsy mametraka bot manokana ianao. Ireo programa kely ireo hanampy anao hanafaka ny tenanao amin'ireo asa mandreraka indrindra izy ireo. Tsy maintsy amboarina izy ireo mba handeha tsara amin'ny fotoana fiasan'izy ireo.
Avy eto dia manoro hevitra anao izahay aza ampiana bots tsy misy fanaraha-maso, tsara kokoa ny maka fotoana kely hahitanao izay mifanaraka amin'ny filanao. Amin'ny fandraisanao an'io fanapahan-kevitra io dia hialanao ny olana sy ny mety ho fisafotofotoana eo amin'ny mpampiasa.
Ity karazana bot ity dia tena ilaina amin'ny mpizara Discord rehetra. Miaraka amin'izy ireo, dia ho afaka hilalao mozika izay ho ren'ny rehetra mpikambana ao amin'ny mpizara, manetsika baiko vitsivitsy fotsiny.
Miaraka amin'ny habetsahan'ny bots eny an-tsena ho an'ity tanjona ity, dia tsy mora ny mahita hoe iza no hanome vokatra tsara indrindra. Noho izany, ato amin'ity lahatsoratra ity manolotra anao torolàlana amin'ny antsipiriany momba ny sasany amin'ireo tsara indrindra izahay.
Iray amin'ireo bots playback mozika feno sy malaza indrindra eo amin'ireo mpampiasa Discord. Izany dia ahafahanao milalao mozika avy amin'ny sehatra samihafa toy ny YouTube, Vimeo, SoundCould, sns., miaraka amin'ny kalitao tsara indrindra sy maimaim-poana tanteraka.
Ankoatra izany, koa manome anao ny fahafahana mamorona playlists manokana. Add, izay mifanaraka amin'ny sehatra mozika mivantana toy ny Twitch.
Bot mozika mahery vaika iray hafa, miaraka amin'ny fiasa maro isan-karazany. Amin'ny alalan'ny tontonana fanaraha-maso dia ho azonao atao ny manitsy ireo fiasa na baiko hafa izay tianao amboarina. Ho fanampin'izany, manana fiasa izy io mba hahafahana manenina, mampangina na mandrara vonjimaika ireo mpampiasa izay mandika lalàna.
Bot mozika maimaim-poana ho an'ny Discord. Tafiditra ao anatin'izany ny fiasa mitovy amin'ny hafa amin'ireto programa kely ireto toy ny fahafahana hilalao hira avy amin'ny sehatra hafa toy ny YouTube, Twitch, Mixer, Bandcamp ary fampielezam-peo marobe.
Miaraka amin'ireo endri-javatra playback, azonao atao ny mitsambikina mankany amin'ny hira manaraka, tadio, mihetsika, manala amin'ny filaharana, sns. Ary koa, Chip manana safidy hampiseho aminao ny tonon'ireo hira voafantina.
Ny tanjon'ity bot ity ho an'ny Discord dia ny hamaha ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fahamaotinana, fialamboly ary mozika. Ny iray amin'ireo lafin-javatra tsara dia ny amin'ny teny Espaniola, izay hahatonga ny fitantanana azy ho mora kokoa ho an'ny mpampiasa.
Ayana dia bot, azo zahana tanteraka amin'izay ilain'ny mpampiasa tsirairay. Amin'ny alàlan'ny automatisms dia azonao atao ny manitsy ny votoatin'ny mpizara. Izy io dia manana mpizara mozika amin'ny alàlan'ny baiko sy lisitry ny kilalao ahafahanao manampy ireo hira tianao indrindra, afaka mihetsika amin'ny hira alefan'ny mpampiasa hafa.
Tena malaza amin'ireo mitady a bot moderation, fa ho fanampin'izany dia afaka milalao mozika ihany koa izy. Famakafakana ho azy ny resaka ao amin'ny lohamilina mba hialana amin'ny fihetsika mifanohitra amin'ny lalàna. Amin'ny alàlan'ny andiana baiko, ireo mpampiasa izay manao ratsy dia azo ampangina na roahina.
Mifanaraka amin'ny sehatra mozika hafa izy io toy ny YouTube, Twitch na SoundCloud. Manampy izany, fa ny MEE6 dia misy lalao mozika mahafinaritra hankafizinao miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao, izay tsy maintsy haminavinao ny hira sy ny mpanakanto milalao.
Farany, mitondra anao ity vaovao ity izahay mozika bot izay ahafahanao mihaino mozika miaraka amin'ny mpizara fifandraisana. Azo amboarina izy io, manome anao fahafahana mametraka ny anjara toeran'ny mpilalao, manala ireo hira dika mitovy, ary mamorona lisitra mainty fantsona mihitsy aza.
Ireo bots rehetra voalazanay ireo ary misy maro hafa azo alaina sy apetraka amin'ny Discord. Ny tsirairay amin'izy ireo dia hanome anao andiana fitaovana isan-karazany mba tsy ho antonony fotsiny, fa hahatonga ny resakao ho toerana mavitrika sy mahafinaritra kokoa.
Betsaka ny zavatra ho fantatra momba ity fampiharana hafatra ity, fa raha mbola mitranga izany dia ataovy ho tontolo tokana ny mpizara anao amin'ny alàlan'ny fanamboarana azy amin'ny bots tianao indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » fandaharana » Bots mozika tsara indrindra ho an'ny Discord